Ny tontolo manodidina, ny fitsaharan'ny fadimbolana
Ny fandinihana ny fiaraha-monin'ny zava-mananaina rehetra no atao hoe "écologie". Antoky ny fahasalamana ny tontolo manodidina antsika. Raha misy fikorontanana ny manodidina dia misy akony ratsy foana, ny rivotra, ny rano sotroina, ny hazavana entin'ny masoandro. Mihena ny ely rehefa miaina ny fitsaharan'ny fadimbolana ny vehivavy, mila omanina ny fiatrehana izany amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny fisotroana rano ary ny fikoloana ny tontolo manodidina...
Eo afovoanareo misy Olona anankiray...
Alahady 13 desambra 2020 — Alahady fahatelo amin'ny Fiaviana — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 1, 6-8. 19-28 — Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo : nirahiny hitondra teny soa mahafaly amin’ny malahelo Aho.
Pejy 14 amin'ny 109